ဇွန် 2015 |3၏စာမျက်နှာ 18 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 3)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဇြန္လ 2015
အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းပြ: Pamela Kleibrink Thompson ကအားဖြင့်ဝီလျံရှိတ်စပီးယားကနေဖခငျအကွံဉာဏျ
ဒါကြောင့်အသက်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှပြောပြတယ်အဖြစ် Pamela Kleibrink Thompson ကအဆိုပါသနေိုငျ Bard ငျ့ဉာဏျပညာဝေမျှပေးသည်။ အဆိုပါအိုင်ဒါဟိုရှိတ်စပီးယားပွဲတော်ရဲ့ရာသီမကြာသေးမီကစတင်ခဲ့ပြီးငါ Bard ကျေးနှငျ့ဉာဏျပညာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင် imbued ကြောင်းသတိပေးခံခဲ့ရသည်။ ရှိတ်စပီးယားတစ်ဦးကတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲကြီးသူဖြစ်သောကြောင့်တွစ်တာ, Facebook, Google Plus, သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးမီဒီယာမတိုင်မီရှည်လျားအောက်ပါကြီးမားတဲ့ခဲ့ ...
HD ကိုမှ TNDV ကူးအပြောင်းကာလအလှမယ် Tennessee ပြည်နယ်အလှမယ်
သူကနှစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် Nashville, ဇွန်လ 25, 26 နှင့်ဆက်စပ်သည်သူ၏ 2015th တစ်နှစ်ကျင်းပအဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ပိုင်ရှင် NIC Dugger သိသိသာသာထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မြှင့် instills - မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအထူးကု TNDV ယင်း၏ 2004 ကတည်းကရုပ်မြင်သံကြားအထူးထုတ်လုပ်ထားပြီး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာနှစ်ပေါင်းကြောင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူမတိုင်မီနီးပါး 14 ခဲ့သည် နှင့်သမ္မတ NIC Dugger သောအဖွဲ့သည်အတူရုပ်မြင်သံကြား၌မိမိက start တယ် ...
InfoComm 2015 အသုတ်စုံ
အသံနှင့်အမြင်အာရုံနယ်ပယ်တွင်အသစ်ကဘာလဲ? ကောင်းပြီဒီမှာသဲလွန်စင်ကထုတ်လွှင့်ကနေလမ်းထရုံ3နာရီ Studios က Beat ရဲ့ ... ဖွင့် Give? ဒါဟာ Orange County တွင်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌သာနောက်ဆုံးပေါ် Audio / အမြင်အာရုံမီဒီယာ extravaganza Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် InfoComm 2015, ပါပဲ။ သင်ရုံတက်ရောက်ခဲ့သည်လျှင်, သငျသညျကိုယျတိုငျ 1000 ကျော်ထံမှနီးပါး 100 ပြသခဲ့သည်ကိုမြင်လျှင် ...
GLOOKAST စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှာစားသုံးမိခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ streamlines
ဆက်သွယ်ရန်: ကေသီကိန်း [အီးမေးလျ protected] Ph: 954-302-2024 508-981-2932 GLOOKAST စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သုံးစွဲ streamlines နှင့်ဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Davis (FL-ယူအက်စ်အေ) နှင့်ပေါ်တို (ပေါ်တူဂီ) ဇွန်လ 19, 2015 မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ - GLOOKAST, MXF လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ဆန်းသစ် ဖြေရှင်းချက်, Globo, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားဖြစ်တီဗီကွန်ရက်များထဲကတစ်ခု, GLOOKAST ရဲ့ရှေးခယျြထားတော်မူကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတယ် ...
နာရေးကျွောငွာ - ဂျိန်းအေအိပ်ရာ 1942-2015
ဂျိန်းအေအိပ်ရာလေးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထင်ရှားတဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်ရန်ပုံငွေပွဲနှင့်, အကျိုးအမြတ်မယူကဏ္ဍအတွက်မဆုပ်မနစ်ထောက်ခံသူသူမ၏သမီး Tracy C. အိပ်ရာသည်နှင့်အညီ, ဒါ့အပြင်၏, Fayette, Alabama တှငျ, အသက် 73 မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ 1982-1991 ကနေ National Public Radio မှာဖွံ့ဖြိုးရေးဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမစ္စအိပ်ရာ, ကျယ်ပြန့်က၎င်း၏ 1983 မှတဆင့်က NPR မြင်နေနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြု ...
Aframe ဘီဘီစီကမ္ဘာတစ်ဝန်းရဲ့ Formats ရေးအဖွဲ့ရန်တိမ်တိုက်ဗီဒီယိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပလက်ဖောင်းပေး
Aframe ကမ္ဘာတဝှမ်းက၎င်း၏ client များနှင့်အတူပုံစံ Screener hosting နှင့်မျှဝေ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဘီဘီစီကမ္ဘာတစ်ဝန်းရဲ့ Formats ရေးအဖွဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ Aframe ထိုကဲ့သို့သောအတိအကျလာကြကနေသည်နှင့် The ဂရိတ်ဗြိတိန်အဖြစ် Screener ၏ဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းဗဟို repository ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲပေါ်တယ်နှင့်အတူဘီဘီစီ Worldwide မှထောက်ပံ့ ...
JSTV တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးစွာ 4K OB Truck ကားများတွင် Riedel ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထုတ်လွင့်ပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ထားသည်
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဇွန်လ 25, 2015 - တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး 4K OB ထရပ်ကားတည်ဆောက်ခြင်းခုနှစ်, Jiangsu အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (JSTV) နှင့် System Integration နယူးဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ Holdings က (NDT) Riedel ဆက်သွယ်ရေး '' အဆိုတော်ဒစ်ဂျစ်တယ် matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး, MediorNet Compact Pro ကိုမီဒီယာကွန်ရက်များနှင့် RockNet ရှေးခယျြခဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စွယ်စုံဆက်သွယ်ရေးကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်အကြားရိုးရှင်းတဲ့ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုများနှင့် signal ကိုလဲလှယ်ဖွင့်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကွန်ရက်က။ ...
JMR Electronics Lightning ဆောင်းပါးတွဲကို Thunderbolt2flash drive
JMR တစ်ဦးစွယ်စုံအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်များအတွက်အထက်တန်းလွှာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်-မောင်းနှင် application များအတွက်သိုလှောင်မှုစနစ်၏အဓိကထုတ်လုပ်သူများနှင့်လည်း System Integration, အဖြစ်လူသိများသည်: Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဗီဒီယို, VOD, DCC, ပညာရေး, အစိုးရ, စစ်တပ်, ဂိမ်းကစားခြင်း, လုံခြုံရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်, HPC နဲ့ Web 2.0 ။ JMR ရဲ့အစိုင်အခဲများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု RAID စနစ်များကိုသူတို့ရဲ့ Chatsworth ကယ်လီဖိုးနီးယားရုံးများမှထုတ်လုပ်, 1982 ကတည်းက USA တွင်လုပ်နေကြသည်။ ...
3 ၏စာမျက်နှာ 18«12345 » 10...နောက်ဆုံး»